तपाईले मलाई मद्दत गर्न सक्नु भएको ब्याकलिङ्कहरूको एसईओ फाईलहरू समझाएको छ?
अरू केही गर्नु अघि, एसईओ मा ब्याकलिङ्कहरूको बारेमा मुख्य चमकमा हेरौं. तपाईले यी सामान्य सर्तहरूलाई आफैं वेब लिङ्क र लिङ्क इमारतको प्रक्रियामा स्तरको बारेमा थाहा पाउनुपर्छ. चलो लिंकहरूको बारेमा आधारभूत परिभाषाहरूसँग वर्णन गरिएको धेरै आधारभूत कुराहरू हेर्नुहोस्.
Backlinks को बारे मा धेरै मूलभूत बातें बताईएको छ
लिंक रस - एक सामान्य अनुमान को लागी एक निश्चित माप को बजाय. लिङ्कको जुनस "होगा", "मूल्य," "मूल्य," र "प्राधिकरण" लिङ्क जुन एक वेब पृष्ठबाट अर्कोमा लिइएको छ।. यो शब्द HTML कोडमा सम्मिलित DoFollow विशेषतासँग गुणस्तर ब्याकलिङ्कको सन्दर्भ दिन प्रयोग गरिन्छ. यस्तो ब्याकलिङ्कहरू सामान्यतया पासित वा पृष्ठबैंक स्कोरको रूपमा चिनिने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण वेब लिङ्क मेट्रिकहरू मध्ये एकलाई पुन: वितरित गर्ने उद्देश्य छ।.
DoFollow को साथ बैकलिंक
लिंक को दोहोरो - एसईओ उद्देश्य को लागि उपयोग गरिने बैकलिंक को एक मात्र प्रकार हो. बस गर्नुहोस्, DoFollow घुमावहरूमा साथ ब्याकलिङ्कहरूको बलियो शक्ति मुख्यतया लिंक रस पार गर्न सक्ने क्षमताको वरिपरि. यी लिङ्कहरू अनुक्रमणका उद्देश्यहरूका लागि सेवा गर्दछ - मेरा मतलब छ कि उनीहरूले खोज क्रल गर्ने बिट्समा विभिन्न भागहरू र तपाईको साइट वा ब्लगको पृष्ठहरू नेविगेट गर्न मद्दत गर्छन्।. एकै समयमा, DoFollow सँग ब्याकलिङ्कहरूले वेबमा अन्य ठाउँमा गन्तव्य पृष्ठमा इंगित बाह्य मार्ग प्रस्ताव गर्दै छन्।. यसको अर्थ प्रत्येक जीवित प्रयोगकर्तालाई यस्तो लिङ्क जडानको बाटो "पछ्याउन" अनुमति दिइएको छ.
NoFollow with Backlinks
NoFollow Backlinks अन्य प्रकार को लिंक्सहरु लाई व्याख्या गर्न सकिन्छ, तथापि, लगभग शून्य वजन र एसईओ मा प्रभाव. NoFollow ट्यागसँग इम्बेड गरिएको, यी लिङ्कहरूले लिङ्क रस पठाउन सक्दैनन्. त्यसोभए, तिनीहरूले पेज रैंकिंग स्थितिमा सीधी प्रभाव पाएनन्. उदाहरणका लागि, कुनै फाईलहरू पूर्णतया वेबसाइट वा ब्लगको साथ बाह्य जडान सेट गर्न आवश्यक छैन जब लिंकहरू प्रयोग गर्न सकिन्छ. यद्यपि, तिनीहरू अझ अझ राम्रो अनुक्रमणिका लागि उपयोगी छन् र तपाईं असमान शक्ति र उद्देश्य संग विभिन्न लिङ्कहरूको विविध विविध पोर्टफोलियो बनाउन मद्दत गर्न सक्नुहुन्छ।. र विशेष गरी विविधता तपाईंको लिङ्क प्रोफाइलको सबैभन्दा लाभकारी सम्पत्ति हो. मेरा मतलब यो सिग्रोले Google को खातामा लिईएको पर्याप्त मात्रामा महत्वपूर्ण छ जब यो खोज रैंकिंग पोष्टहरू प्राप्त गर्न आउँछ.
कम गुणस्तर ब्याकलिङ्क
ब्याकलिङ्कहरूको यस श्रेणीको कम गुणस्तरको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। सामान्यतया एउटा ह्रास प्रयासमा सिर्जना गरिएको छ जुन हालको खोजी स्थानिय स्थानहरुलाई बढावा गर्न सकिन्छ।. मेरो मतलब, स्प्याम, अप्रासंगिक वा यहाँ सम्मका अवैध गन्तब्यहरूमा दाँत, यी लिङ्कहरू तपाईंको समग्र एसईओ प्रयासलाई सम्भावित हुने सम्भावना छ, बरु कुनै वास्तविक सुधार दिने. यही कारणले तपाइँलाई चेतावनी दिनुपर्छ र कम गुणस्तरको लिङ्कबाट टाढै जानुपर्छ जुन सामान्यतया लिङ्क पाङ्ग्राहरू (लिङ्क एक्सचेन्जहरू), पीबीएनहरू (निजी ब्लग सञ्जालहरू), वा बिक्रीको लागि प्रतीक रूपमा प्राकृतिक भुक्तानी लिङ्कहरू प्रदान गर्ने बेपत्ता प्रदायकहरूको प्रायः ठूलो मात्रामा उत्पन्न गरिन्छ।.
यो प्रकारको लिङ्क भवन वेबसाइटको आर्किटेक्चरमा ठोस आधार प्रदान गर्न प्रयोग गरिन्छ, अझ राम्रो र थप प्रयोगकर्ता-अनुकूल ब्राउजिङ्ग अनुभवमा योगदान दिँदै. आन्तरिक लिङ्कहरू पासको डोमेन एउटै डोमेन भित्रै दिइरहेछन् - केवल बिभिन्न सेक्सनहरू र वेबसाइट वा ब्लग भित्र सम्बन्धित पृष्ठहरू मार्फत सजिलो बनाउने. तथ्याङ्क, तथापि, एक राम्रो तार्किक संरचना अझै पनि एक मापन योग्य सिग्नल हो, जुन लामो दौडमा सम्भवतः उच्च खोजी रैंकिंग स्थितिमा योगदान दिन सक्दछ, कम्तिमा अप्रत्यक्ष Source .